Igbo, John: Lesson 017 - Ndịozi isii mbụ (Jọn 1:35-51) | Waters of Life
Home -- Igbo -- John - 017 (The first six disciples)
3. Ndịozi isii mbụ (Jọn 1:35-51)
40 Otù nime madu abua ahu ndi nuru okwu si n'ọnu Jọn puta, ndi so-kwa-ra Ya, bu Andru, nwa-nne Saimon. 41 Onye ahu buru uzọ chọta nwa-nne nke aka ya, bú Saimon, si ya, Ayi ahuwo Mesaia-ayi (nke bu, ma asugharia ya, Kraist). 42 O we me ka ọ biakute Jizos. Jizos lere Ya anya, si, Gi onwe-gi bu Saimon nwa Jọn. Agākpọ gi onwe-gi Kifas (nke bu Pita, ma asugharia ya).
Andru, nwanne Pita, bụ onye na-akụ azụ si Beit Saida n'ọdọ mmiri Tiberias. Ọ bịara na Baptizim maka nchegharị mmehie, na-echere Mesaịa ahụ na-abịa. Andru nakweere àmà nke Baptizim, wee soro Jizọs. Obi-ya juputara n'ọṅù; ọ pụghị ịchọta ihe ọ chọpụtara n'onwe ya, ma chọọ nwanne ya nwoke, kama ọ bụghị ndị bịara abịa. Ya mere, Andru, nwanne nwoke nke okenye, mgbe ọ chọtara nwanne ya nwoke siri ike mebiri ozi ọma, sị, "Anyị achọtala Kraịst na Onye Nzọpụta ahụ, bụ Onyenwe anyị, Nwa Atụrụ Chineke." Pita nwere ike inwe obi abụọ, ma Andru kwadoro ya. N'ikpeazụ, Pita sooro ya ma gaakwuru Jizọs ka nwere nsogbu.
Mgbe Pita batara n'ụlọ, Ọ kpọrọ ya aha. Jizos wee tinye uche n'echiche ya, n'enye ya aha ohuru - "Nkume ahu". Jizos maara ihe nile gbasara oge gara aga nke Jizos, nke di na ugbua. Jizọs maara obi ndị na-emeghe ya. Pita ama ọfiọk onyụn̄ ọtọn̄ọ ntak ke ini enye okodude ke Jizos. Jizọs malitere iji ndidi mee ka onye ọkụ azụ ahụ dị oké njọ gbanwee nkume. Ọ ghọrọ Kraịst ntọala maka Chọọchị. Ya mere, n'echiche Andru, ọ ghọrọ onye na-eso ụzọ ọsụ ụzọ.Onye ọzọ bụ onye na-eso ụzọ nyekwaara nwanne ya nwoke ọbara aka. Jọn duru James, nwanne ya nwoke, nye Jizos ọ bụ ezie na ọ na-ezochi aha ya na ozioma ya, ihe ịrịba ama nke ịdị umeala n'obi. N'eziokwu, Andrew na Jọn bụ ndị mbụ na-eso ụzọ abụọ n'usoro oge.Mma nke amaokwu mmeghe ndị a bụ ihe atụ na ọdịda anyanwụ - ọbịbịa nke oge ọhụrụ. Ndị a kwere ekwe abụghị ịchọ ọdịmma onwe ha nanị, kama duru ụmụnna ha gaa n'ebe Kraịst nọ. N'oge a, ha abanyeghi n'okporo ụzọ na okporo ụzọ iji zisaa ozi ọma, kama ha lekwasịrị anya na ndị ikwu ha ma duru ha gakwuru Kraist. Ha adighi agbaso ndi n'echeghi anya ma obu ndi ochichi, mana ha choro ndi choro Chineke, ndi nwere obi iru ala na ndi na-agughari obi.Ya mere ayi nacho uzo esi agabiga ozi ọma nke amara, obugh site n'inwebiga uchu, ma obu ihe nenwe nke nesi na Jisos puta. Ndị a na-eso ụzọ mbụ ahụghị ụlọ akwụkwọ ndị ọkà mmụta okpukpe, ha edeghịkwa akụkọ ndụ ha, kama ha na-ahụ okwu ọnụ nke ahụmịhe ha. Ọ hụrụ Jizọs ma nụ ya, bitụ aka ya ma tụkwasị ya obi. Mkpakọrịta a na-akpachi anya bụ isi iyi nke ikike ha. Ị zutere Jizọs na ozioma ya? Ndi afo ama ada usụn̄ fo ke usụn̄?
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs, anyị na-ekele gị maka obi ụtọ n'ime obi anyị. Mee ka anyị nwee obi ụtọ nke mkpakọrịta gị, duru ndị ọzọ gaa n'ebe ị nọ. Nye anyị ikike ịkwusa ozi ọma na ịhụnanya. Gbaghara mgbaghara na ihere anyị ka anyị wee jiri obi ike gbaa aha gị.
Olee otú ndị na-eso ụzọ mbụ si gbasaa aha Jizọs?
Page last modified on March 05, 2020, at 05:41 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)